Muxuu ka yiri Mikel Arteta kaddib markii uu ku guuleystay koobkii ugu horreeyay xirfadiisa tababarnimo ee Arsenal? – Gool FM
(London) 02 Agoosto 2020. Tababaraha kooxda Arsenal ee Mikel Arteta ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay guushii muhimka aheyd oo ay kooxdiisa kaga gaartay Chelsea finalkii FA Cup, taasoo ka dhigtay inuu ku guuleystay koobabkii ugu horeeyey xirfadiisa tababarnimo ee naadiga Gunners.
Haddaba tababaraha kooxda Arsenal ee Mikel Arteta ayaa ciyaarta kaddib u sheegay warbaahinta:
“Wuxuu ahaa sanad xoogaa yar la yaab leh, waxaa jiray tababare yimid bartamihii xilli ciyaareedka, kaddibna waxaa soo ifbaxay cudurka saf mareenka ah ee COVID-19 kaasoo loo joojiyay horyaalka”.
“Waxaan uga mahadcelinayaa kooxda kalsoonida weyn oo ay ii muujiyeen, iyo ruuxda ciyaartoyda dhexdooda ah”.
“Waxaan doonaynay inaan ka farxino taageerayaasha oo aan dib ugu soo celinno Arsenal booskeedii caadiga ahaa, waxay aheyd daqiiqadii aan raadineynay” ayuu hadalkiisa ku soo xiray tababare Mikel Arteta.